अल्लाहले केही महत्वपूर्ण उद्देश्यले खानपिनका तरिकाहरु बयान गर्नु भएको छ, जस्तै… अल्लाहको वरदानको सम्झना, विभिन्न किसिमका रोगहरु, फजुलखर्च र घमण्डबाट जोगिन इत्यादि।
Read more: खानपिनका तरिकाहरु
व्यक्ति र समाजमाथि पर्न गएका ब्याजका नकारात्मक प्रभावहरु-
व्यक्ति र समाजमाथि पर्न गएका ब्याजका नकारात्मक प्रभावहरु
इस्लामले ब्याजको मामिलामा अति कठोरता आपनाएको छ, ’cause यसले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो संसारलाई तहसनहस र छियाँ-छियाँ पारेको छ, तीमध्ये केही यस प्रकार छन्…
मालको विभाजनमा छिन्न-भिन्न र धनी गरीब बीच ठूलो खाडल-
Read more: व्यक्ति र समाजमाथि पर्न गएका ब्याजका नकारात्मक प्रभावहरु-
यदि कोही इस्लाम पूर्वदेखि नै ब्याजमा फसेको छ भने उसले के गर्नु पर्छ?
उपर्युक्त कुरालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ…
१- यदि ब्याज लिनु पर्ने थियो भने उसले इस्लाम अपनाउने वित्तिकै साँवा बाहेक अरु केही लिन पाउँदैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि प्रायश्चित गर्छौ भने तिमीहरुका लागि साँवा छ। न तिमीहरू अत्याचार गर्ने छौ न तिम्रो साथमा नै अन्याय हुनेछ।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/२७९)
Read more: यदि कोही इस्लाम पूर्वदेखि नै ब्याजमा फसेको छ भने उसले के गर्नु पर्छ?
ब्याज खानु अत्यन्तै अवैध काम हो। इस्लामले ब्याजलाई सदाको लागि अवैध गरेको छ। यसलाई ठूलो पापको सूचीमा राखेको छ। अल्लाहले ब्याज खाने र त्यसको कारोबार गर्ने अपराधीलाई युद्धको चेतावनी दिनु भएको छ। इस्लाम पूर्वका धर्म शास्त्रहरुले पनि ब्याजलाई अवैध गरेका छन्, तर यी कुराहरु परिवर्तन भएकाले यथावत रुपमा बाँकी छैनन्। अल्लाहले यहूदी र क्रिस्चियनहरूमाथि आफ्नो प्रकोप किन अवतरण गर्नु भयो भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्दै भन्नु भएको छ… “निषेधित गरे पनि ’emले ब्याज लिने गर्थे।” (श्रोत- सूरह अन्-निसा : ४/१६१)
१- ब्याजको कारोबार गर्ने व्यक्ति अल्लाह र रसूलको साथ युद्ध गर्छ, त्यसैले ऊ अल्लाह र रसूलको शत्रु हो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि तिमीहरू ब्याजको कारोबार छाड्दैनौ भने अल्लाह र रसूलसित युद्ध गर्न तयार होऊ। यदि प्रायश्चित गर्छौ भने तिमीहरुका लागि साँवा छ। न तिमीहरू अत्याचार गर्ने छौ न तिम्रो साथमा नै अन्याय हुनेछ।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/२७९) यो यस्तो युद्ध हो जसको असर मानसिक तथा शारीरिक रुपमा पर्छ। मानिसहरुले जे जति असन्तुष्टि, व्याकुलता, दु:ख र चिन्ताहरू भोगिरहेका छन्, त्यो त्यही ब्याज खाने, अल्लाह र रसूलको अवज्ञाको परिणाम हो। याद राख, महाप्रलयको दिन यस युद्धको परिणाम कस्तो होला !
Read more: ब्याजको परिणाम
ऋणीले ऋणको साँवा बाहेक दिनु पर्ने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ। यो इस्लामि विधान अनुसार अवैध छ, ’cause यसमा अन्याय र हानि छ।
हुनत ब्याजका धेरै किसिमहरु छन्, तर प्रसिद्ध र अति अवैध किसिम… ऋण र सापट बापतको ब्याज हो, किनकि यसमा खरिद-बिक्री केही पनि हुँदैन, तै पनि साहुले ऋणीमाथि ऋणको बोझ थप्ने गर्दछ। यो दुई किसिमका छन्-
ऋणीले ऋणको साँवा बाहेक दिनु पर्ने थप धन वा रकमलाई ब्याज भनिन्छ। .
Read more: ब्याज
धोका र अज्ञानता
धोका र अज्ञानताको अभिप्राय- यी यस्ता कारोबार र मालसामानहरु हुन् जसको ’boutमा केही जानकारी छैन वा शंकास्पद वस्तुहरु हुन् जसले गर्दा क्रेता-बिक्रेता दुवैमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ वा कसैमाथि अन्यय हुन सक्छ।
इस्लामले यस्तो कारोबारलाई अवैध गरेको छ, यद्यपि दुवै पक्षको राजी खुशीले किन नहोस्। ’cause यसमा अन्याय र धोका छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले अज्ञात र शंकास्पद वस्तुहरुको कारोबारलाई अवैध गर्नु भएको छ।” (श्रोत- मुस्लिम : १५१३)
Read more: धोका र अज्ञानता
अल्लाहले गाँस, बास र कपासकै पूर्तिको लागि मेहनत र मजदुरी गर्ने आदेश दिनु भएको छ। यी कुराहरु यसरी स्पष्ट हुन्छन्…
जबसम्म मानिस मेहनत र मजदुरी गरेर कमाउन सक्षम छ भने उसले अरुसित मागेर खानु अवैध छ। जसरी अजिङ्गरको आहारा अल्लाहले पूर्ति गर्नुहुन्छ, त्यसरी मानवको आहारा पनि उहाँले अवश्य पूर्ति गर्नु हुनेछ। यदि मेहनत मजदुरी गर्न सक्ने व्यक्ति मागेर जीवन यापन गर्छ भने उसको सम्मान अल्लाह र मानिसको नजरमा घट्छ।
Read more: तपाईको आर्थिक कारोबार
जुवा-तास भनेको के हो?
कुनै दौड वा खेलकूद प्रतियोगितामा दुई खेलाडी वा दुई प्रतिस्पर्धी वा दुई दर्शक बीच शर्त लगाउनु र जित्ने पक्षले हार्ने पक्षको माल खाई दिन्छ। यसरी प्रत्येक सहभागी अरुको असफलताको लागि तात्पर्य हुन्छ र यो नै जुवा-तास हो।
Read more: जुवा-तास
इस्लामले आर्थिक कारोबारमा उच्च आचरण अपनाउने प्रेरणा दिन्छ
अन्याय र गलत तरिकाले अर्काको माल खानु
युद्ध सम्बन्धी इस्लामको आचरण
परोपकार र दया (रसूल को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु)